Rita, Writing for My Sake!: ကျွန်မတို့ လက်ထပ်ဖြစ်ကြရင်... - ဂျူး
Posted by Rita at 6/04/2010 04:00:00 PM
အိမ်နံမယ်က ဒေါင်းဖလ်ဝါ၊ ခွေးနံမယ်က helio။ မိုးပေါ်ကကို ဆင်းချင်ပုံမရဘူး။ ဂျူးရဲ့ အဲဒိ ၀ထ္ထုကို ကောင်းကောင်း ‘သိ’ တယ်။ နောက်ဆုံး စာပိုဒ်ကိုလည်း ‘သိ’ တယ်။ ခုတလော နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံစားရတာတွေ သိပ်များနေတယ်။ မနေ့ညကလည်း ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း စာတွေဖတ်နေရင်း ငွေတာရီရဲ့ ကဗျာလေးကို အမှတ်မထင်တွေ့လို့ ရွတ်ကြည့်ရင်း မျက်ရည် ဆို့မိတယ်။ ဇီဇ၀ါကတောင် အံအားသင့်လို့။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုသတိရသလို ငွေတာရီကိုလည်း သတိရမိလို့ထင်တယ်။ ခုဂျူးတယောက် တိုးလာပြန်ပကော။ အမှတ်တရကို ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ခံစားမှု နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရလို့ သိပ်သဘောကျတယ်။
(နိုင်ငံခြားကို မဖြစ်မနေ ထွက်ရတယ်ဆိုတာ တော်လို့လား ညံ့လို့လား ကိုယ် ခုထိ မသေချာသေးပါ။)
အဲဒါကို ခဏခဏ တွေးမိတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂျူး..ကိုအမ စသိတော့ ကြေမွသွားသောတိမ်တိုက်များအကြောင်း။
အဲ့မတိုင်ခင်က အမကို သူင်ချင်းကောင်လေးအချို့ကပြောသည် ၀တ္တုထဲကစာသားတွေခိုးမချနဲ့တဲ့။ ကိုယ်ကပြောသည် ငါ့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးတွေလို့..သူတို့ကမယုံ။ကိုယ်ကတကယ်လဲ ဂျူးဆိုသည်ကို နာမည်သာကြားဖူးပီး မဖတ်ဖူးခဲ့။ ဖတ်မဲ့ဖတ်တော့ အပေါ်ကစာ။ ဒီလိုနှင့် ကိုယ်ဂျူးကို အံ့သြခဲ့သည်။ ဇာတ်ကောင်ထဲကစရီုက်တွေကပီပြင်သလို ကိုယ်ရဲ့အတွေးတွေနှင့်တထပ်တည်းကျနေသည့် လုပ်ရပ်များကို အံ့သြမိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဂျူးခရေစီဖြစ်သွားသည်။ အမှတ်တရကို ရအောင်ပြန်ရှာဖတ်မိသည်။ တိုက်ဆိုင်စွာပင် အမှတ်တရအတိုင်း ပုံစံကွဲပီး ကိုယ်လက်တွေ့ကြုံခဲ့သည်။ အခုချိန်ထိ ပြန်ဖတ်တိုင်း သတိရကြေကွဲရသည်။ ဂျူး ၏အတွေးအခေါ်ကို ကိုယ်ကြိုက်သည် သို့သော်အားလုံးတော့မဟုတ်။
အင်း..အမလဲ ငယ်ငယ်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးသည်။
အမအိမ်လေးက မနိမ့်မမြင့်တောင်ကုန်းမြင့်ကလေးပေါ်မှာ လျှောတံခါးတွေအကုန်တပ်မည်။ မှန်ပတ်လည်နှင့်..အောက်ခြေမှာ ပန်းပင်လေးတွေ စီရရီပုံဖော်ထားမည်။ အသင့်အတင့်ကျယ်ဝန်းသောခြံကလေးပေါ့။ ခြံကိုဖြတ်ရန် ကြိုးတံတားလေးလဲ ရှိရမည်။ စမ်းချောင်းကလေးက အိမ်ပတ်လည်မှာ ရှိနေမည်။ ဟီးးးး...ငယ်ငယ်က အမရဲ့အိမ်။
ဂျူးစာသားတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ မျှဝေတာကျေးဇူးးးး
ဆရာမဂျူးရဲ့ စာသားလေးတွေကို ရီတာ့အတွေးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး reviewမဆန်တဆန်လေးရေးထားတော့ အရသာတမျိုးပဲ ဖတ်လို့သိပ်ကောင်းတယ်
@ Bro Watote, မိုးပေါ်က မဆင်းချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိပ္ပါယ်တမျိုးတည်းကို လှည့်ပတ်ပြီး ပေးရတာ သဘောကျခဲ့လို့။ အဲဒီတုန်းက ကြောင်မွေးဖို့ပါ စိတ်ကူးမိခဲ့ရင် နာမည်က "solar" ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ :D
@ naychi, ဟုတ်တယ်။ နှစ်မျိုးလုံးပါပဲ။ "နိုင်ငံကို စွန့်ခွာပြီး ထွက်ခွာရမည့် အဖြစ်မျိုး" ဖတ်ရတော့ အတော်ပဲ ထိသွားတယ်။ (မျိုးချစ်စိတ် ဘာညာဘာညာ စကားလုံး အကြီးကြီးတွေနဲ့တော့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။)
@ အစ်မမြတ်နိုး, ဟုတ်တယ် အစ်မ။ ဂျူးကို ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေးသမျှ ကြိုက်တယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရေးတဲ့စာတွေမှာ ခံစားမှုအရ မကြိုက်တာ ပါရင်တောင် သူ့ကိုတော့ impressive ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
သူ့ကိုကြည့်ပြီး တွေးမိတာ တစ်ခုလည်း ရှိတယ်။ "နိုင်ငံကို စွန့်ခွာပြီး ထွက်ခွာရမည့် အဖြစ်မျိုး" မရောက်ချင်ဘဲ ရောက်ရတာမျိုး (အတိအကျ ပြောရရင် ညီမလိုလူမျိုးမှာ) မဖြစ်ချင်ရင် သူ့လို ပညာသိပ်တော် သိပ်တတ်နေဖို့၊ သူ့လို အားထုတ်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ လိုတယ် လို့ တွေးမိတာ။ ပညာတတ်တယ်ဆိုတာ ဘာဘွဲ့တွေရတာ မရတာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
မှန်တာ ပြောရရင် ညီမ ငယ်ငယ်တည်းက ပညာတတ်တွေကို ဘယ်လောက်တောင် အထင်ကြီးလဲ အားမကျခဲ့ဘူး။ ညီမ အားကျတဲ့လူတန်းစားက တမျိုး၊ လုပ်တတ်ကိုင်တတ် ရှာတတ်ဖွေတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ။ စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်တဲ့ လူမျိုးတွေ။
ဒါပေမဲ့ ဂျူး အကြောင်းတွေးမိရင်တော့ ပညာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အမြင်ဟာ အနဲဆုံး သူ့တယောက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောင်းကို ပြောင်းသွားရတယ်။ "နိုင်ငံကို စွန့်ခွာပြီး ထွက်ခွာရမည့် အဖြစ်မျိုး" ကို မရောက်အောင် နေနိုင်တဲ့လူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သူ့လို ဆရာဝန်တယောက် နိုင်ငံခြားထွက် စာသင်၊ ဘွဲ့တွေ အများကြီး ယူလာပြီး ပြန်လာနေလည်း ဖြစ်တာပါပဲ။ best seller စာရေးဆရာတွေ စာရေးနေရုံနဲ့လည်း ရပ်တည်နိုင်တာ ရှိမှာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဂျူး ကတော့ ဒါ့ထက်အများကြီး ပိုတဲ့ လူမျိုးလို့ ခံစားမိတယ်။
@ အနမ်း, ကိုယ်က တဆင့် ပြန်မျှတာပါ။ fb က ဂျူး အဖွဲ့သားတွေ စာရိုက်တင်ကြတာ။
@ KHSL, :D တကယ်တော့ ဖတ်ပြီး ထင်ရာမြင်ရာ ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဒီတိုင်းချရေးချင်ခဲ့တာပါပဲ။ review ရေးရတာကျ နဲနဲ တာဝန်ကြီးတယ်ထင်လို့။
ပြီးတော့ အွန်လိုင်းမှာ ပြန်ညွှန်းပေးလို့ရတဲ့ စာမျိုးကို ရေးရတာတော့ ပိုကောင်းတယ်။ မူရင်းစာကို ဖတ်ချင်ရင် အညွှန်းကနေ ချက်ချင်းသွားဖတ်လိုက်ရုံပဲ။ အွန်လိုင်းမှာ မရှိတာကို ရေးမိရင်ကျ မူရင်း ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေ ခက်ကုန်ရော။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ဖူးလို့ပါ။
ဂျူးစာတွေ နဲ့ ညီမ အတွေးလေး ရေးထားတာ ဖတ်လို့ကောင်းတယ် မနေ့ည က မန့်မရလို့ အခုပြန်လာတယ်
အင်ဥ ဆိုတာ အင်ပင် ရှိတဲ့ ဘယ်ဒေသ မှာမဆို ပေါက် ပါတယ် စားလည်းစားကြပါတယ် ညီမ ရောက်တဲ့ အချိန်တွေက အင်ဥ ပေါ်တဲ့ အချိန် မဟုတ်လို့ ထင်ပါတယ်..
နောက်ပြီး သူ့ကို စား၇ဘို့ အချိန်က သိပ်တိုလွန်းတယ် ခဏနေ ဆို ရင့်သွားပြီ မကောင်းတော့ဘူး ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားလေးမှ
ကျွေးချင်ပါတယ် ညီမရယ် နောက်မြန်မာပြည် ပြန်ရင် ဒီလို မိုးဦးကျလေး ပြန်ခဲ့ပါ အင်ဥပေါ်ချိန်ပေါ့
အမ လည်း တအားကြိုက်တော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်
အမလည်း Kyaw Hnin Se Lwin ပြောသွားသလိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ငါလည်း ဘယ်လိုဆိုတာပါ လိုက်လိုက်တွေးမိစေတယ်...း)
It, I mean the first line, was meant to beajoke, Rita..
ကိုယ်မဖတ်ဖူးသေးဘူးထင်တယ်။ fb မှာ သွားပြန်ရှာပြီး ဖတ်ဦးမှ။
စာကြွေးတွေ အကုန်မရှင်းရသေးဘူး ရီတာ။
အိမ်လွမ်းနေတာနဲ့ စာပြန်ရေးဖို့ တော်တော်အားပြန်ယူနေရတယ်။ :(
@ မရွှေဇင်, အင်ဥ အင်ဥ အင်ဥ လို့ စိတ်ထဲမှာ တသသ ဖြစ်နေမိတယ် :D
@ မမသီတာ, ဟုတ်တယ် မမ။ အဲဒီ မူရင်းစာကို ဖတ်ရတာ သူနဲ့တူတူ လိုက်တွေးမိခဲ့တယ်။
@ Bro Watote, ya, I know what u mean, bro. swimming pool နာမည်တောင် "သူရကန်" ဖြစ်နိုင်တယ်။ တကယ်ကို အဲဒီ နာမည်ကို series လိုက် မှည့်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့တာ။ :D
@ ဇွန်, welcome back!
ကိုယ်လည်းပဲ ပြန်ရောက်ကာစက အလုပ်တောင် လုပ်မစားချင်တော့ပါဘူး ဖြစ်မိတယ်။ နောက်တော့လည်း အသားကျသွားတာပါပဲ။ စာမရေးချင်ရင် ရိုက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ စာနဲနဲ ပေါင်းရေးပြီး တင်လေ။ တသက်လုံး မြင်လာရတဲ့ မြန်မာပြည်ပုံတွေဖြစ်ပေမယ့် အဝေးရောက်နေတော့ ထူးဆန်းပြန်သေးတာပါပဲ။
ချောင်းမြောင်းလုပ်ကြံဖို့ထက် ရှေ့တည့်တည့်ကနေ သေနတ်နဲ့ ပစ်ချင်တတ်သူသာ ဖြစ်သည်။
ဟဲဟဲ..တူတူပဲ။။ ဒါပေမဲ့ အမက လူသတ်ဖို့လောက်အောင်မုန်းသူမရှိသေးဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ကို ဘာ..ဘာ..ဆိုပီးပြောသူတွေကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ စကားလုံးတလုံးချင်း အချက်ကျကျလေးပြန်ပြောရတာကိုကြိုက်တယ်။
သြော်..ညီမ.. အမတော့ ညီမတွေးသလို မတွေးဘူး။
အမ အထင်တော့ မြန်မာပြည်မှာရှိနေပီး မထွက်လဲ ရတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲလေ။
ပညာနဲ့တော့ သိပ်မဆိုင်ပေမဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပီးတော့ .. ဘ၀မှာ ငါ ဘယ်လိုနေထိုင်ချင်လဲနဲ့လဲဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ အိပ်ချင်ပီညီမရေ..အွန်လိုင်းမှာပဲ နောက်မှထပ်ဆွေးနွေးမယ်။
ဆင်းရဲခြင်းတွေ ဖိနှိပ်ခြင်းတွေဖြင့် ပြည့်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထဲသို့ ကိုယ်ရင်သွေးလေးကို ခေါ်ယူမွေးဖွားလိုက်ရမှာ တော်တော် အကုသိုလ်များသည့် အလုပ်ဆိုတဲ့ စကားကိုဘုရားနဲ့အတိုက်အခံပြောတက်တဲ့အကျင့်ရယ်...
"ပုရောဟိတ်" "လိပ်ပြာတို့၏ တချိန်တုန်းက''
MICT Park မှာဆင်းသွားတဲ့ ကောင်လေးချောချောလေးတစ်ယောက်ရယ်...(အဲဒီနေ့က မြေနီကုန်းကို စာသင်ဖို့သွားတာဆိုတော့)
တိမ်နဲ့ချည်တဲ့ကြိုးဆိုရင် မေမေငယ်ငယ်ကပြောပြောနေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း စာရေးဆရာမလေးဟာ ဆရာမဂျူးများလားတောင်မသိဘူးနော်...
(ကျွန်မ၏သစ်ပင်စာအုပ်ကို ရန်အောင်စိုးကိုဝယ်ခိုင်းဖူးတယ်သူကတော့ ယဉ်ယဉ်နဲ့တူတယ်တဲ့...)